दर्जन कम्पनीका शेयरको मूल्य अंकित दरभन्दा तल झर्यो, दोस्रो बजारमा नयाँ लगानीकर्ता पस्ने अवसर को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)
दिलिप[ 2019-02-10 07:56:56 ]
सुझावका अाधारमा शीर्षक सच्याउनु भएकाेमा धन्यवाद । तर अंकित दर (face rate) हुन्न अंकित मूल्य (Face Value) हुन्छ ।
दिलिप[ 2019-02-10 02:16:33 ]
अाधारमूल्य भनेकाे के हाे ? सायद अंकित मूल्य भन्न खाेजेकाे कि नेटवर्थ ? यस्ताे गलत शव्दकाे प्रयाेग नगर्दा राम्राे हुन्थ्याे ।